China Overview uye hunhu hwekuyerera kudzora mavhavha Mugadziri uye Mutengesi | Guorui
Mhedziso uye hunhu hwekuyerera kudzora mavhavha
Iyo inoyerera inoyerera vharuvhu vharuvhu inovimba nekushandura kuyerera kwemvura yeiyo orifice kudzora kuyerera kweiyo orifice pasi peimwe musiyano wekumanikidza, nokudaro kugadzirisa kufamba kwekumhanya kweactuator (hydraulic cylinder kana hydraulic mota). Inonyanya kusanganisira vharafu yekumusoro, yekumhanyisa vharuvhu vharuvhu, yekufashukira throttle vharafu uye diverter muteresi vharafu. Fomu rekumisikidza kumisikidza kuiswa. Iyo yekubatanidza nzira yakakamurwa kuita flange mhando uye tambo mhando; Welding mhando. Kudzora uye kugadzirisa nzira dzakakamurwa kuita otomatiki uye echinyorwa.
Iyo inoyerera yekudzora vharuvhu, inozivikanwawo seiyo 400X kuyerera yekudzora vharuvhu, ndeye multifunctional vharafu iyo inoshandisa yepamusoro-chaiyo mutyairi nzira yekudzora kuyerera.
1. Shanduko kuchimiro chekudzora nzvimbo yemvura yekushandisa nekushandisa chirafu cheplate kana yakanyatso gadziridza vharuvhu, uchishandisa mavharuvhu akanangana neayo kudzikisa kurasikirwa kwesimba mukubvongodza
2. Kudzora kwepamusoro kunzwisisika, kuchengetedzeka uye kuvimbika, nyore kugadzirisa dambudziko uye hupenyu hurefu hwebasa.
Iyo inoyerera yekudzora vharuvhu inogona otomatiki kuwana kuyerera kuyerwa kweiyo system pasina yekunze magetsi magetsi Kuyerera kwacho kunogumira nekuchengetedza musiyano wekumanikidza pakati pemberi neshure kweiyo orifice (yakagadziriswa kuzarura) inogara iripo, saka inogona zvakare kunzi inogara ichiyerera vharafu.
Chinhu cheye inoyerera kuyerera vharuvhu kuyerera, uko kunogona kukiya huwandu hwemvura inoyerera kuburikidza nevhavha, kwete iyo bharanzi yekushora. Iye anogona kugadzirisa dambudziko rekushomeka kusaenzana kweiyo system: kuitira kuti ichengetedze kushanda kwakanyanya kweimwe firiji, bhaira, kutonhora shongwe, chinja kupisa, nezvimwe, zvinodikanwa kudzora kuyerera kweiyi midziyo kuti igadziriswe pa iyo yakatarwa kukosha; kubva kumagumo esisitimu, kuitira kudzivirira iyo pesvedzero pesvedzero yesimba yekugadzirisa inodawo kudzikamisa kuyerera kumagumo mudziyo kana bazi.
Dambudziko rinofanirwa kutariswa mune dhizaini, kusakosha kweiyo inoyerera vharuvhu ndeyekuti vharafu ine yakaderera kushanda musiyano zvinodiwa. Zvigadzirwa zvakajairika zvinoda hushoma hwekumanikidza kushanda musiyano we20KPa. Kana yakaiswa padunhu risingafadzi, zvinoda kuti pombi yemvura inotenderera iwedzere nemamita maviri echikamu chemvura. Musoro unoshanda unofanirwa kuiswa pamagumo ekupedzisira uye kusagadzikana kumagumo ekupedzisira. Usaise inoyerera yekudzora vharuvhu kana mushandisi ari kure neanopisa sosi inopfuura 80% yenzvimbo yekupisa.
Musiyano uripo pakati pekuvhura hydraulic sys ...
Trimellitic anhydride musika saizi, yepasirese ...